State Counsellor participates in the video conferences of the Special ASEAN Summit and the Special ASEAN Plus Three (APT) Summit on COVID-19
Union Minister U Kyaw Tin participates the Special ASEAN-Russia Foreign Ministers’ Meeting on COVID-19
State Counsellor participates 36th ASEAN Summit and ASEAN Leaders’ Special Session on Women’s Empowerment in the Digital Age
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) မှ Surgical Masks များ လာရောက်လှူဒါန်း
ပြည်ပနိုင်ငံများ၌အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကနေဒါဆွေးနွေးပွဲတွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်
Permanent Secretary U Soe Han co-chairs the 17th ASEAN-Canada Dialogue held via video conference
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
August 10, 2020(၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး မစ္စတာအိချိရို မာရိုယားမားအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ (၁၅၀၀) နာရီတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားရေး၊ COVID-19 အလွန်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေရန် နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများ အချိန်မီ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးနှင့် COVID-19 ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကာလရှည်နေထိုင်ခွင့် ရရှိထားသူများနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ ပညာသင်များ ပြန်လည်လက်ခံသွားရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်နိုင်ရေးတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Don Pramudwinai တို့ တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့် ဆွေးနွေး
August 7, 2020(၇-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Don Pramudwinai နှင့် ၇-၈၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် (၁၀၃၀) နာရီတွင် တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့် လက်ခံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက H.E. Mr. Don Pramudwinai အား လက်ရှိထမ်းဆောင်နေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာထူးတာဝန်အပြင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအား ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပေါ် ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး lockdown ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ပြည်သူများအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုမိုမြှင့်တင်ရေးအတွက် နယ်စပ်ဂိတ်များတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရေး၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု လွယ်ကူလျင်မြန်ချောမွေ့စေရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရေး၊ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ထောင်ရေးကိစ္စ၊ ရေလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားရေး၊ မောတောင်-စင်ခွန်း၊ ထီးခီး-ဘန်ဖူးနမ်ရွန်၊ ပုံပါကျင်ဒေသ BP-1 စသည့် နယ်စပ်ဂိတ်များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အလားအလာများ ဆွေးနွေးရန်အတွက် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလအလွန် နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပသွားနိုင်ရေး၊ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နေရပ်မပြန်ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်နေထိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၂) သိန်းခန့်အား နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း (၂) နှစ် တိုးမြှင့်ပေးသွားမည့်ကိစ္စ၊ COVID-19 ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှု အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ တစ်ဆင့်ချင်း ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များအပါအဝင် ခရီးသွားများအား ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုနိုင်မည့် အလားအလာတို့အပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကောင်းများ ဖန်တီးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ လက်ခံရေးစခန်းအတွက် ပစ္စည်းကိရိယာများပံ့ပိုးရေး၊ ငါး၊ ပုဇွန် မွေးမြူရေးနှင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် ယန္တရားများ ပံ့ပိုးရေးစီမံကိန်း (၃)ခု အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စ၊ အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
July 29, 2020(၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်) ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ပရှိ မြန်မာသံရုံး၊ မြန်မာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးနှင့် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများတွင် နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရေးကိစ္စများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ၂၉-၇-၂၀၂၀ ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မွန်းလွဲ (၁၃၃၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးရေးအတွက် မဲဆန္ဒရှင်များ ပုံစံ (၁၅) အား ၅-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဖြည့်စွက်ပေးပို့ကြရန် မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ နှိုးဆော်သွားရေးကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ စိစစ်ပြီးသည့် ပုံစံ (၁၅) များအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အချိန်မီ ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ မြန်မာသံရုံးများသို့ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုပြီး မဲလက်မှတ်များအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများအလိုက် အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲပေးပို့ရေး၊ မြန်မာသံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများတွင် မဲရုံများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှ ချမှတ်ထားသည့် COVID-19 ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဟန်ချက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးတို့အပေါ် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်နှင့် ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များက နိုင်ငံ ပြင်ပရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများ ပြည်တွင်း၌ ဆန္ဒမဲပေးရမည့် အစီအစဉ်များ ရှင်းလင်းပြောကြားရေးကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လေ့လာသူများ (Election Observers) လာရောက်မည့်ကိစ္စ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံး/ အဖွဲ့အစည်းများမှ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာရန် အဆိုပြုမှုကိစ္စရပ်များ စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ယခုကာလမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံတကာလေကြောင်းများ ရပ်နားထားသည့် ကာလဖြစ်သဖြင့် ပုံစံ (၁၅) များ၊ ဆန္ဒမဲပြားများနှင့် ဆန္ဒပြုပြီး မဲလက်မှတ်များအား လုံခြုံစွာနှင့် အချိန်မီပေးပို့ရေးအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်များ၊ အထူးလေယာဉ်များနှင့် အချိန်မီ ချိတ်ဆက်ပေးပို့ရေး အစီအမံများ ပြုစုတင်ပြရန်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ လွဲမှား/ လစ်ဟာမှုများ မရှိစေရေးအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးမှု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို မြန်မာသံအမတ်ကြီးများနှင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ပြုလုပ်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားကြရန်၊ သံရုံးစိုက်ရာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက မဲရုံများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လေ့လာလိုသည့် နိုင်ငံခြားသံရုံးများ၊ ပြည်ပမှ လေ့လာသူများအား ကူညီပံ့ပိုးရေးကိစ္စများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ကြရန် နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေေေထွရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို (၁၆၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။...
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား (၁၃) ကြိမ်မြောက် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်(Relief Flight) ဖြင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေး
August 11, 2020(၁၁-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ စင်ကာပူမြို့) COVID-19 တားဆီးကာကွယ်ရေးအစီအမံများကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ၁၁-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၅:၃၀ နာရီတွင် (၁၃) ကြိမ်မြောက် Relief Flight အဖြစ် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း (Myanmar National Airlines-MNA) ပျံသန်း အမှတ် UB 1002 ဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ကာလတိုလာရောက်စဉ် ပိတ်မိနေသူများ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသား/သူများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် ဖျက်သိမ်း/ ရပ်နားခံထားရသူများ၊ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး လွတ်မြောက်လာသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆေးကုသမှုပြန်လည်ခံယူရန် လိုအပ်နေသူများ၊ သင်္ဘောသားများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၁၅၀) ဦး လိုက်ပါသွားကြပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လေဆိပ်၌ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲ မရှိစေရေးနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ထွက်ခွာနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော သံရုံးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ချန်ဂီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ သွားရောက်၍ လိုအပ်သည်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
(၅၃)နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဆီယံအလံတင် အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း
August 11, 2020(၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ ဘာလင်) ၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၀၉:၃၀ နာရီတွင် ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pomma Boutthavong က ဦးစီးလျက် အာဆီယံအဖွဲ့ တည်ထောင်သည့် (၅၃) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လာအိုသံရုံးဝင်းအတွင်း၌ ကျင်းပသော အာဆီယံအလံတင် အခမ်းအနားသို့ ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ ပုံမှန်အားဖြင့် အာဆီယံနေ့ အခမ်းအနားကို ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီသည် နွေရာသီ အားလပ်ရက်များ ပြီးဆုံး၍ ဂျာမန်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည့် စက်တင်ဘာလ၌ ဂျာမန်နှင့် သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်း မိတ်ဆွေများအကြား အာဆီယံနိုင်ငံအလိုက် ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာပစ္စည်းများ၊ အစားအသောက်များ တည်ခင်းလျက် ခမ်းနားစွာ ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကျရောက်နေမှုကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ ဘာလင်-အာဆီယံ လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များဖြင့်သာ အကျဉ်းချုံးလျက် အာဆီယံအလံတင် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၃။ အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံအလံလွှင့်တင်ခြင်း၊ အာဆီယံသီချင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဘာလင်အာဆီယံကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ လာအိုသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pomma Boutthavong က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွက် အာဆီယံအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုယ်စား ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nguyen Minh Vu က ယခုနှစ်အတွင်း အာဆီယံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား အကျဉ်းချုံး ပြောကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပြီး အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများ အဖွဲ့လိုက် မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးကြကာ အစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။...
ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက အာဆီယံနေ့အကြို အလံတင်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာဝန်ကြီးနှင့် အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
August 10, 2020(၇-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ လန်ဒန်မြို့) ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်၊ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီမှ ၁၂:၃၀ နာရီအထိ လန်ဒန်မြို့၊ ဘရူနိုင်းမဟာမင်းကြီးရုံး၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံနေ့အကြို အလံတင်ပွဲအခမ်းအနား (ASEAN Day Flag Raising Ceremony) နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာဝန်ကြီး Rt Hon. Nigel Adams MP နှင့် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများ၏ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ အာဆီယံလန်ဒန်ကော်မတီ (ASEAN London Committee – ALC) သံအမတ်ကြီးများနှင့်အတူ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနေ့လယ်စာစားပွဲ၌ ဗြိတိန်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျှော့ချရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်း တိုက်ဖျက်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်ရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ရေး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးအတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအခြေအနေ၊ အီးယူအဖွဲ့မှ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခွဲထွက်ရေး (Brexit)အပြီး အနာဂတ် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရေးရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှု အခြေအနေများနှင့် မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့၏ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ် (Relief Flights) ခရီးစဉ်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ကူညီ၊ ချိတ်ဆက်ပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိမှု စသည့် ကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။...